Raggii iyo dumarkii reer Saaxil ma Cali Ahmed Koshin iyo Roda Ahmed Yassin baa ka hadhay by Abdi Mustafe‏
Raggii iyo dumarkii reer Saaxil ma Cali Ahmed Koshin iyo Roda Ahmed Yassin baa ka hadhay by Abdi Mustafe‏ 0 July 10, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 658
Raggii iyo dumarkii reer Saaxil ma Cali Ahmed Koshin iyo Roda Ahmed Yassin baa ka hadhay by Abdi Mustafe‏ Labada qofeeka damqadaoo ka hadla waxa ay dowlada Silaanyo ka wado Berbera waa Gudoomiyaha Ucid ee gobolka Saaxil Roda Ahmed Yassin iyo Gudoomiyaha Waddani ee gobolka Saaxil Cali Ahmed Koshin.
Dadka intii kale ee reer Saaxil ahayd ma Tsunami baa laysay oo meesha cid kaleba kuma noola. Ma Cali Xoor Xoor baa lacag u qeybiyey oo kala diray. Mee Muse dalab ma Silaanyo ayuu u gacan galay. Reer Berbera dadka
uuguma liitaane waxayu dagaalami waayeen dhulka Dekeda ee caqilka Aadna madoobe iyo gabadha Silaanyo dhalay la siiyey iyo wershada laydhka. Raggii reerSaaxil ma Cali Ahmed Koshin baa ka hadhay, Dumarkii
reer saaxil na ma Roda Ahmed Yassin baa ka hadhay. Subxaana al-ladii laa ilaaha ila huwa al-xayu-al-qayuum. Ma Berbera ayaa kolba qar la goosanayaa oon cidi ka daaya lahayn. Ma Baashe Morgan baa emaaraatka Safiir looga dhigay si uu Dekeda Berbera u wareejiyo oo ingiriis hore lagu yidhi Berbera wax go' lagu qaado ka weyn. Ma wasiirka madaxtooyada ayaa duleedka Berbera jifadiisa qasab ku deegaamynaya oo reer Berbera ku
daawanayaan. Haduu abwaan Qassim beri yidhi Hargiesay anaa kaa hurdee laguma heysteene hadaba maanta waxa taagan Berberay anaa kaa hurdee Dekedaada lama hungureeyiin. Reer Berbera gacan ha siiyaan labada qof ee
damiirka le Roda iyo Cali ee waagii beryaba ka ooyaya sida Berbera beeli uula wareegeyso. Hadii kale halkaa dacayda laa-laadiya oo ku daawada Morgan iyoXirsi intay dibada idinka dhiga yaan gobalka Saaxil.
Ahmed Yassin iyo Cali Ahmed Koshin waxaan ku hambalyay nayaa ka hadalka
ay mar walba bulshada tusaan wax yaabaha foosha xun ee Berbera laga wado.